Kodzero-dzevanhu, 04 Chikumi 2019
Chipiri 4 Chikumi 2019
Sachigaro weCrisis In Zimbabwe, VaRashid Mahiya, Vogara Vachityira Hupenyu Hwavo
Vanhu vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vaenda nhasi mangwanani vachitsvaga sachigaro we Crisis In Zimbabwe Coalition, uye vari mukuru we Heal Zimbabwe Trust, Va Rashid Mahiya, vachivatsvagwa asi vakasa buda panze sezvo vanoti vange vachityira hupenyu hwavo.
ARTUZ Inoti Kuramwa Mabasa Kuchapera neMusi weChitatu
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti ARTUZ, rinoti mumwe wevatungamiriri vesangano iri, VaGodfrey Chanda, vambotorwa nevasori ndokuchengetedzwa muGweru kwemaawa maviri, veruzhinji vasingazivi kuti varipi.
ZCTU Yoita Hurukuro naVaMnagagwa Apo Mitengo Yoita Chamurambamhuru
Zvinhu munyika zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyaya dzezvehupfumi zvopa kuti vanoongorora nyaya dzezvehupfumi nezvematongerwo enyika vati hurumende yave kungopumha vanoipikisa huroyi ichishandisa mapepanhau akaita seHerald kurova bembera.
Chikumi 03, 2019
Vanorwira Kodzero dzeMhuka Vokurudzira Kuti Dzibayiwe Majekiseni eKudzivirira Zvirwere
Sangano rinorwira kodzero dzemhuka, reZimbabwe National Society For the Prevention of Cruelty to Animals rinoti rinoshamiswa kuona vanhu vane mari vachitadza kubaisa imbwa dzavo nhomba kuitira kuti dzisaite chirwere chechimbwamupengo.
Varairidzi Votanga Kuramwa Mabasa
Varairidzi vachitungamirwa nesangano rinovamirira kumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatanga kuratidzira munyika yose nhasi.
Vanotengesa Michero Inobva KuChimanimani nChipinge Voomerwa neHupenyu
Vanotengesa michero nezvirimwa maMutare zvinobva kuChimanimani nekuChupinge vave kuchema chema nekukwira kwaita mitengo yezvinhu sezvo zvirimwa zvizhinji zvakaparadzwa nedutumupengo reCyclone Idai.
Rahman Gumbo naLloyd Mutasa Votungamira Zimbabwe kuCosafa
Murairidzi wechikwata chenhabvu chemaWarriors Sunday Chidzambwa adzoka kumusha kuzochema baba vake vakashaya nezuro achisiya vatevedzeri vake, Rahman Gumbo naLloyd Mutasa vachirairidza kumakwikwi eCosafa kuSouth Africa.
Vamwe Varairidzi Votanga Kuramwa Mabasa
Sangano reARTUZ dzichiratidzira nekufora gore rapera. Sangano iri rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzoenda kumabasa kubva Muvhuro kusvika Chitatu.
Chivabvu 31, 2019
Komisheni Ichaferefeta Mhirizhonga muChinhoyi, Mash West, Inodomwa
Komosheni inoona nezverunyararo nekugarisana zvakanaka, yeNational Peace and Reconciliation Commission, kana kuti NPRC, yaumba komiti yekutanga munyika muChinhoyi mudunhu reMashonaland West.
Varwiri veKodzero Vogara Vakabatira Ura Mumaoko Vachitya Kusungwa
Varwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kukwanisa kuita basa ravo nemazvo sezvo vari kushungurudzwa nevasori avo vari kuuya kumisangano yavo pamwe nekumahofisi avo.
Hurumende Yoshorerwa Chinono paKuvandudza Mitemo Yakaita sePOSA neAIPPA
Nyika dzakawanda dzakabudirira dziri kuratidza pachena kuti hadzisi kufara nekukundikana kwehurumende yeZimbabwe kuvandudza mitemo inonzi iri kutyora kodzero dzevanhu uye yezvekudyidzana munyaya dzekutengeserana.